EOstreliya: Ividiyo yoopopayi ethi Ngumntu Onjani Umhlobo Wokwenene?
ABEMI 40 642 855
ABAVAKALISI 98 353
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 66 022
Inkalipho Yokubonisa Abanye
UEmily uneminyaka eyi-12 kwaye uhlala eOstreliya. Ngenye imini utitshala wakhe wathetha nabantwana beklasi yakhe ngokubaluleka kokukhetha abahlobo abalungileyo. Oku kwavula ithuba lokuba uEmily abonise utitshala wakhe ividiyo yoopopayi ethi, Ngumntu Onjani Umhlobo Wokwenene? Xa utitshala kamva wayibonisa iklasi, abantwana bayibukela ngomdla. Emva koko, bachitha iyure bencokola ngayo. Lo titshala wayibonisa nezinye iiklasi eziliqela. Ngoko, uEmily wabonisa utitshala nabantwana beklasi yakhe i-jw.org. UEmily uthi: “UYehova wandinika inkalipho yokubonisa abafundi abaninzi iwebhsayithi yethu. Wandisikelela ngokwenene.”
Umnyhadala Wezoshishino Emaphandleni
Abavakalisi abahlanu bahamba iiyure ezisithoba kwiindlela ezinezigingqi ezigudla iintaba besiya kumisa itafile eneencwadi kumnyhadala wezoshishino owawuseSuai, eTimor-Leste. Ababezile bamangaliswa kukubona iincwadi ezithetha ngeBhayibhile ngeelwimi zasekuhlaleni eziyi-12 kuba uninzi lwezo lwimi lwaluneencwadi ezimbalwa okanye zingekho kwaukubakho. Elinye ibhinqa labona umxholo wenye incwadana laza lothukile lakhwaza lathi, “Lulwimi lwam!” Laliqala ngqa ukufunda incwadi ebhalwe ngolwimi lwalo, isiBunak. Kwiintsuku nje ezine, abavakalisi bahambisa iincwadi eziyi-4 571 baza bacelwa ngabantu abaliqela ukuba babatyelele emakhayeni abo. Abantu abaninzi abanomdla babeqala ukudibana namaNgqina kaYehova. Abantwana bachitha iiyure ezininzi bebukele ungcelele lweevidiyo oluthi Yiba Ngumhlobo KaYehova ngolwimi olusisiTetun Dili. Abanye babo bankqaya amazwi ezi ngoma baza bazicula ngovuyo.
ETimor-Leste: Abantwana babukele iividiyo ezikungcelele oluthi Yiba Ngumhlobo KaYehova
“Yiloo nto Kanye Eyayidingwa Ngabafundi”
UBrian noRoxanne, abavangeli basemazweni, bacela imvume yokumisa itroli eneencwadi kwikholeji eyayikwisiqithi sasePalau. Badibana nomphathi wekholeji baza bambonisa ividiyo kwi-jw.org ethetha ngomsebenzi wethu wokushumayela esidlangalaleni. Bashiya nezinye zeencwadi ababezimisele ukuzibeka etrolini. Wabaxelela ukuba kufuneka babe nentlanganiso nomphathi wemicimbi yabafundi. Emva kwayo, baxelelwa ukuba kufuneka babe nenye intlanganiso kunye nomphathi wecandelo elithile lekholeji.
UBrian uthi: “Sancokola kamnandi naloo mphathi, kodwa wathi masibuyele kwiofisi yomphathi wekholeji, apho kwathiwa masibhale ileta sicele imvume yokumisa itroli eneencwadi. Sasiwa ngapha nangapha, ngoko sasityhafile, kodwa safane sayibhala loo leta.”
EPalau: URoxanne noBrian bancokola kamnandi nabafundi xa babeka itroli yeencwadi ngakwikholeji
Emva kokuba beyithumele, uBrian noRoxanne baphinda baya kumphathi wecandelo elithile lekholeji, belindele ukuba akazokubanika imvume. UBrian uthi: “Sothuka xa wathi uzifundile iincwadi esasizishiyile kwaye ucinga ukuba ziluncedo kakhulu. Wongeza wathi, yiloo nto kanye eyayidingwa ngabafundi.” Satsho sayifumana imvume!
UBrian uqhubeka athi: “Umphathi wemicimbi yabafundi wasixelela ukuba, abafundi abahlala ekholejini babesisiwa apho bathanda ukukhonza khona qho ngeeCawa. ‘Ukuba bafuna ukukhonza nani, singabasa.’ Sothuka kakhulu. Endaweni yokuba isikhabe isicelo sethu, ikholeji yayikulungele ukubasa ngokwayo abafundi eHolweni yoBukumkani!”
Ngosuku lokuqala uBrian noRoxanne bebeke itroli eneencwadi ekholeji, bahambisa iincwadi eziyi-65, iimagazini eziyi-8 neencwadana eziyi-11. Bancokola kamnandi nabafundi. Umphathi wecandelo elithile lekholeji nomphathi wemicimbi yabafundi babacela ukuba babuye kwakhona.
Abathengi Babukela Iividiyo Zethu
ULipson, ilungu lentsapho yaseBheteli, wayebuyela kwiiSolomon Islands emva kokushumayela intsasa yonke. Njengoko wayedlula kwenye ivenkile, weva kukhala ingoma yoBukumkani, waza waqond’ ukuba makangene. Wamangaliswa kukubona igquba labantu, abantwana nabadala bebukele ividiyo yengoma 55 enomxholo othi, “Ubomi Obungenasiphelo—Ekugqibeleni!,” ekungcelele oluthi Yiba Ngumhlobo KaYehova. Yathi yakugqiba ukudlala, umnini wevenkile wathi, “Ndicela ukunibonisa enye ividiyo.” Wafaka ividiyo yoopopayi ethi Abulunganga Ubusela. Ukuphela kwayo, wabayala bonke esithi ze bangabi evenkileni yakhe.
Ngoxa yayidlala loo vidiyo kwakungena abantu abaninzi. Umnini wevenkile wathi kubo, “Ndicela ukunivisa eyona ngoma ndiyithandayo.” Waphinda wadlala ingoma 55. Emva koko, wababonisa ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? kunye nethi Yintoni Eyenziwayo Xa Kufundwa IBhayibhile? ngesiPidgin sakwiiSolomon Islands.
Liqaqobana nje labantu abahlala kwiiSolomon Islands abaneIntanethi ngenxa yokuba iyabiza yaye ayifumaneki kuzo zonke iindawo. Nakubeni kunjalo, lo mnini wevenkile ongelilo iNgqina likaYehova, uncedisa ekutyaleni imbewu yenyaniso ngokubonisa abantu abeze evenkileni yakhe iividiyo zethu.
KwiiSolomon Islands: Umnini wevenkile uthanda ukubonisa abathengi iividiyo ezikwi-jw.org/xh
Wafumana Igama LikaThixo Encwadini
NgeMivulo, isibini esiselula sithanda ukusebenzisa itroli eneencwadi eNouméa, idolophu elikomkhulu laseNew Caledonia. Ngenye imini, ibhinqa elineentloni leza kwitroli laza lingathethanga naso lathatha incwadi enomxholo othi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Labuya emva kwesiqingatha seyure liphethe loo ncwadi. Lathi kweso sibini, “Benikhe nakubona oku?” Lavula incwadi lasibonisa igama likaYehova, laza lathi, “Ligama likaThixo! Bendisenza uphando elayibrari kangangeeveki eziliqela ukuze ndiqonde inyaniso ngoThixo. Kodwa ndithathe incwadi yenu, ndakhwela emotweni yam. Into yokuqala endiyibonileyo xa ndiyityhila ligama likaThixo, uYehova. Ndiqonde ukuba ndinyanzelekile ukuba ndibuye ndize kunibulela.” Esi sibini sancokola kamnandi nelo bhinqa saza salibonisa umxholo okwisihlomelo othi “Igama LikaThixo—Ukusetyenziswa Kwalo Nentsingiselo Yalo,” kwincwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile. Lathi lifuna ukuqhubeka nophando lwalo elayibrari kuqala, kodwa liyayazi ukuba ibaphi itroli ngeMivulo!